Thursday December 26, 2019 - 19:26:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya degmada Tayeegloow ayaa sheegaya in Ayax raxan raxan ku socda uu shalay gelinkii dambe ku degay beeraha ku teedsan magaalada kadibna uu saaka aroortii hore kusii faafay dhulka beeraha Canabka lagu tacbo ee Tayeegloow.
Beeralayda ayaa bilaawday in ay qaaddo weeraro ka dhan ah cayayaanka Ayaxa, waxaa dhulka howdka ah iyo beeraha laga maqlayaa rasaasta ka dhacda qoriga PKM-ka loo yaqaan ama daba miinshaarka.
Shacabka magaalada Tayeegloow xoola dhaqato iyo beeralay uma kala harin dagaalkan ay kula jiraan Ayaxa, sidoo kale qaababka Ayaxa lagula dagaallamayo waxaa kamid ah in tubaalo lashido waxaana larumeysanyahay in Ayaxu uusan u adkeysan karin qiica.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in xasharaadka Ayaxa oo guuraya uu shalay ku degay baadiyaha degmooyinka Luuq iyo Dooloow waxaana durbadiiba bilaawday olole ay dadka isaga difaacayaan.
Ayaxa ayaa bilihii lasoo dhaafay dhibaata ku hayay gobollada Hiiraan,Galgaduud iyo Mudug isagoona soo cunay beero iyo dhir, illaa iyo hadda lama hayo tirakoob rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay Ayaxa sanadkaan ka kacay wadamada geeska Afrika.